Genius 100 Arabica Coffee Drip Coffee 10g 10 Pieces – SUNNY eSTORE
Genius 100 Arabica Coffee Drip Coffee...
Genius 100 Arabica Coffee Drip Coffee 10g 10 Pieces
ကျေညက်စွာ ကြိတ်ထားသော ကော်ဖီမှုန့်စစ်စစ်နှင့် သကြားညိုတို့ရောထားသော စက္ကူအိတ်ကလေး အတွင်းထဲတွင် ပါရှိသည့် အသင့်ဖျော် ကော်ဖီဘူးဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားအဆင့် (၈၃) နှင့်အထက်ရှိသော အရည်အသွေးမြင့် မြန်မာပြည် ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး အတော်အသင့်လှော်ထားကာ အနည်းငယ်ပိုချို၍ ချဉ်သော အရသာရှိသည့် ကော်ဖီဖြစ်သည်။
Inner Sachet included; Mixed with Pure Coffee Fine Ground and Brown Sugar. Ready A Coffee Box,Special Grade (83) and above, High Quality Product, Medium Roasted Coffee, Product of Myanmar, Slightly more sweet and sour taste
Includes: 10 Sachets of Genius 100% Arabica Coffee Drip Coffee 10g